Nke a bụ ihe anyị na-atụ anya site na 5G na-esote site na Realme | Gam akporosis
N’oge na-adịghị anya, anyị ga-enweta ekwentị ọhụụ na njikọta 5G. Realme A mara ọkwa nke a, ọ bụ ezie na-enyeghị nkọwa ndị ọzọ gbasara ngwaọrụ ọzọ a nke enweghị ihe ekwenyela na njirimara ya na nkọwapụta teknụzụ ya.
Site na akaụntụ gị Weibo, Onye nrụpụta ndị China ekpughere na ụdị 5G nke atọ ya n'afọ a ga-abata n'ime elekere ole na ole. Ọ bụ ezie na anyị amaghị ihe a ga-akpọ ya, anyị nwere ọtụtụ ntụnye aka na-ezo aka n'aha ya, yana agwa ndị ọ nwere ike.
Nwere ike ịbụ Realme X50 Ntorobịa
Así es. Companylọ ọrụ ahụ ga-eweta Realme X50 Youth, otu n'ime etiti akụkọ a na-akọkarị asịrị kemgbe izu ndị a gara aga ebe ọ bụ na n'oge na-adịbeghị anya site na ụlọ ọrụ asambodo MIIT na 3C nke China, na-ekpughe njikọta 5G ya na ikike ikike 30W.
Ndị mmadụ na-ekwu otú ahụ Ngwaọrụ a nwere atụmatụ igwefoto quad nke 48 MP na-eduzi. Mpempe akwụkwọ a na - esonyere onye na - agba egbe mpịakọta 8 MP na ihe na - akpata abuo nke ga - adaba na nnukwu lenses na bokeh. N'aka nke ya, maka iji aka gi, oku vidiyo, mmata ihu na ihe ndị ọzọ, igwefoto 16 MP + 2 MP n'ihu igwefoto ga-abanye n'olulu yiri mkpụrụ ọgwụ na akụkụ aka ekpe nke ihuenyo ahụ. Enwere m ike iso ya Qualcomm si Snapdragon 765G.
N'aka nke ọzọ, O nwekwara ike ịbụ na 5G smartphone nke ụlọ ọrụ ahụ ga-abụ Realme X3, nke a hụrụ n'oge na-adịbeghị anya na asambodo TENAA zuru ezu nke na-ekpughe ụdị dị iche iche nke isi ya na nhazi ya.
Dabere na ahụ ihu ọma TENAA, Realme X3 gosipụtara 6.57-inch diagonal screen TFT na mkpebi FullHD + na okpukpu abụọ maka ese foto 16 MP na 2 MP selfie. A na - akwado ya na Snapdragon 765G chipset, nke a na - akwado oge a nwere ihe ruru 12 GB nke RAM na 256 GB nke nchekwa. Ejiri batrị na 4.200 mAh ma kwado 30W ngwa ngwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » N'oge na-adịghị anya mgbe m matara 5G smartphone sitere na Realme: gịnị ka anyị ga-atụ anya ya?